Maxay ka dhigan tahay xil ka qaadista 'Jeneraal Gabre'? - BBC News Somali
Maxay ka dhigan tahay xil ka qaadista 'Jeneraal Gabre'?
Maxaa loo fasiran karaa xilkii laga qaaday korneel Gabra?
Siiqada ay u qornayd warqadda xil-ka-qaadista ee jeneraal Gabre ayaa ahayd mid aad u adag oo aan inta badan la adeegsan marka la eryayo mas'uul sare.
Halkan ka akhriso warqaddii shaqada looga eryey jeneraal Gabre oo af Ingiriisi ku qoran
Image caption Warqadda shaqo ka qaadidda ee Jeneraal Gabre